सचिन तन्दुलकर क्रिकेट खेल्न नेपाल आए ! – Life Nepali
सचिन तन्दुलकर क्रिकेट खेल्न नेपाल आए !
नेप्लेज, ३० कात्तिक । भारतीय पूर्व क्रिकेट सचिन तेन्दुलकरले आज कीर्तिपुर मैदानमा क्रिकेट खेल्ने भएका छन् । युनिसेफको सद्भावनादूत समेत रहेका सचिनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका सवै फरम्याटबाट सन्यास लिइसकेका छन् । उनी युनिसेफको सहयोगमा गएराति काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
कीर्तिपुर मैदानमा आज सचिनले बालबालिकासँग क्रिकेट खेल्ने छन् । त्यसका लागि नेपालले पनि विशेष व्यवस्था मिलाएको छ । बालबालिकासँगको खेलमा एउटा टिमको नेतृत्व सचिनले गर्दा अर्को टिमको नेतृत्व नेपालका पूर्व कप्तान विनोद दासले गर्ने छन् । दासले पनि नेपाली क्रिकेटबाट सन्यास लिइसकेका छन् ।
बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएको ३० वर्ष पुगेको अवसरमा युनिसेफले सचिनलाई नेपाल ल्याएको हो ।
यस अघि भारतीय अन्य क्रिकेटर कपिल देव, सुनिल गवास्कर र महेन्द्र सिंह धोनीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकी जोन्टी रोड्सलगायत क्रिकेटर पनि नेपाल आएका थिए । युनिसेफले सचिनसँग खेल्नका लागि विद्यार्थीको छनोट गरिसकेको छ । त्यसमा महिला र पुरुष दुवै छन् । खेल १०–१० ओभरको हुने बताइएको छ । खेल विहान १० बजेपछि शुरुहुने छ ।
Previous नेपाल भारतसँग ७ विकेटले प’राजित !
Next नाइट क्बलमा भेटिएका विमल, अन्जनसहित ४ खेलाडी राष्ट्रिय टिमबाट बर्खास्त